सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था प्रति शेयर आम्दानीमा कतिले बृद्धि हेर्नुहोस – Palika Express
सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था प्रति शेयर आम्दानीमा कतिले बृद्धि हेर्नुहोस
PalikaExpress २० बैशाख २०७८, सोमबार 219 पटक हेरिएको
धेरै जसो बित्त कम्पनीले चालू आ.ब.को तेस्रो त्रैमासिक बिबरण सार्बजनिक गरिरहेको छन। यसै क्रममा सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक सम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । चालू आ.ब. २०७७/०७८ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा संस्थाले ७ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा यो नाफा २२२.१३ प्रतिशतले धेरै हो । गत वर्षको सोहि अवधिसम्म कम्पनीको यस्तो नाफा २ करोड ४६ लाख ८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
त्यसै गरी यस लघु बित्त्तको सो अवधिसम्म ब्याज आम्दानी पनि ७३.७८% ले बढेर १४ करोड ६३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोहि अवधिसम्म संस्थाले ८ करोड ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गरेको थियो।
हाल सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चुक्तापूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको जगेडा कोष ९ करोड ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी गतबर्षको यसै अवधिमा १७ रुपैयाँ ६० पैसा रहेकोमा चालु आ.ब मा संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी रुपैया ५१.३० पैसा पुगेको छ । संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ रुपैया२९१. ८४ पैसा रहेको छ ।